Nanamafy ny fanolorantenany ny angovo i Iran | Fanavaozana maintso
Tomas Bigorda | | Biomassa, Herin'ny rivotra, angovo hydraulic, Angovo Hygroelectric, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo havaozina
Taorian'ny fiandrasana ela, efa ho 20 taona no niandrasana, hatramin'ny namoronana ilay tetikasa, dia notokanan'ny manampahefana iraniana ny orinasa Herin'ny masoandro Mokran, any amin'ny faritany atsinanan'i Kerman. Io no kompana lehibe indrindra amin'ny karazany misy ao amin'ny firenena ary manana fahaiza-mamokatra 20 megawatts.
Raha ny filazan'ny minisitry ny angovo Iraniana, Hamid chitchian. “Hatramin'izao dia nisy ny tolotra natokana ho an'ny sandan'ny 3.600 an-tapitrisa fampiasam-bola avy any ivelany amin'ny angovo azo havaozina ”.
Amin'izao fotoana izao, i Iran dia manana fahaiza-manao famokarana angovo azo havaozina lehibe indrindra any Moyen Orient, toy ny rivotra, geothermal, hydroelectric ary solar; miaraka amin'ny fahafaha-mamela mamela azy hanondrana angovo elektrika aza. I Iran dia manana masoandro maherin'ny 300 amin'ny herintaona, rivotra mahery ho an'ny angovo rivotra, ary koa ireo zavamaniry mpamokatra herinaratra isan-karazany, ankoatry ny loharanom-baovao angovo azo havaozina.
3 Angovo hydraulic
Fihetsiketsehana miha mahazo vahana hatrany amin'ny faritra rehetra amin'ny zavamaniry, izay manana fanazavana mora be araka ny filazan'ny Alemanina Hans-Josef Fell, filohan'ny Group Watch Energy.
“Ankehitriny dia tena mora ny teknolojia momba ny masoandro sy ny rivotra. Mora vidy kokoa, izany angovo avy amin'ny gazy, solika, arina, izany nokleary ... ary, noho izany, azontsika atao ny manolo ny rafitra angovo mahazatra amin'ny iray hafa izay azo havaozina tanteraka amin'ny ho avy. "
Amin'ny ho avy tsy ho ela dia hanana orinasa mpamokatra herinaratra 100 megawatt i Iran, izay no izy lehibe indrindra any Moyen Orient.
Iran dia heverina ho paradisa ho an'ny famokarana sy fampiasana angovo avy amin'ny masoandro, manana masoandro mitentina 2.800 XNUMX ora isan-taona. Io fahaiza-manao io sy ireo fanampiana natolotry ny governemanta dia nanome fotoana be dia be hampiasa vola eto amin'ity firenena ity.
La rivotra mahery any Iran efa niaina fitomboan'ny fitomboan'ny rivotra tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary manana drafitra hampiakarana be ny famokarana rivotra ankehitriny. I Iran no hany ivontoerana famokarana turbin-drivotra ao Moyen Orient.​
Tamin'ny 2006, 45 megawatt fotsiny ny famokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny rivotra napetraka (faha-30 manerantany). Fiakarana 40% izany tamin'ny 32 megawatt tamin'ny 2005. Tamin'ny 2008, niaraka tamin'ny tobin-herin'aratra Iran any Manjil (any amin'ny faritanin'i Gilan) sy Binaloud (ao amin'ny faritanin'i Khorasan Razavi) no tonga ny totaliny Herinaratra 128 megawatts. Tamin'ny taona 2009, Iran dia nanana tanjaka famokarana herinaratra 130 MW.
Mitombo isan-taona io fahaiza-manao io, amin'ny fisokafan'ny valan-javaboary vaovao. Tsy nandeha lavitra intsony, ny volana martsa lasa teo no notokanana ny farany. Any amin'ny tanànan'i Takestan any amin'ny faritanin'i Qazvin no misy azy, ary 55 MW ny heriny. Natolotry ny Vondron'ny orinasa MAPNA, izay nandaniany vola mihoatra ny 92 tapitrisa dolara.
Iran dia mamokatra herinaratra 10.000 14 megawatt, izay mihoatra ny 70.000% amin'ny famokarana XNUMX mv.
Ny harem-pirenena momba ny solika sy ny gazy dia nampihemotra ny fahafantarana ny filàna fampivelarana angovo azo havaozina, saingy ankehitriny kosa dia mikasa ny hampitombo ny famokarana masoandro, rivotra ary hydro.
Iray amin'ireo zavamaniry iraniàna lehibe ny orinasa Siah Bishe, zavamaniry hydroelectric voalohany Fanatobiana paompy manerana ny Moyen Orient, Tetikasa efa-polo taona
Ny rafitra dia ahitana fitahirizan-drano roa ao amin'ny reniranon'i Chalus, misy 86 sy 104 metatra ny haavony ary 49 sy 330 metatra ny halavany ary manodidina ny 3,5 tapitrisa metatra toratelo eo ho eo ny fatrany. ampitain'ny pipa mega eo afovoan'ny tendrombohitra dia mandatsaka ny rano amin'ny herinaratra amin'ny turbines amin'ny ora fitakiana izy ireo ary manondraka azy mandritra ny alina, rehefa misy herinaratra tsy ampiasaina ao amin'ny tambajotra.
Nasongadin'ny governemanta ihany koa ny zava-bita ho an'ny Repoblika Islamika "nahavita ny tetikasa na dia teo aza izany fetra apetraky ny sazy iraisam-pirenena" tato anatin'ny taona vitsy lasa.
Ny orinasa Siah Brisheh dia mitentina eo amin'ny 300 tapitrisa euro ary mitaky ny fandraisana mpiasa mihoatra ny 5.000, dia niaraka tamin'ny renivohitra iraniana irery ihany ary ny 90 isan-jaton'ny teknolojia sy ny faritra dia Iraniana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Iran dia manamafy ny fanolorantenany amin'ny angovo azo havaozina
Olana lehibe manerana an'i Eropa ny fahantrana amin'ny angovo
Google te hampiasa sira hitehirizana angovo azo havaozina